Villa Ananya - I-Airbnb
Panadura, Western Province, i-Sri Lanka
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Ramesha
I-Villa Ananya iyindawo ekahle yokubalekela impilo yedolobha ematasa. Ithuthelwe edolobheni eli-10 km kude ne-Colombo futhi izothatha cishe imizuzu engama-40 ngosuku olumatasa. I-Villa Ananya iyi-bunglow yamakamelo angu-3 enechibi elibheke echibini le-bolgoda elihle. Indawo ezungezile izolile futhi inokuthula nezinhlobonhlobo zezinyoni. Ukuphuma kwelanga nokushona kwelanga kuyamangalisa. Leli chibi lihlala umdobi wendawo ukuze azibambe nsuku zonke. Ukuhamba ngesikebhe ngezimoto kanye ne-kayaking kungahlelwa ngokwesicelo.
I-villa inamakamelo ama-3 aphindwe kabili e-A/C anamagumbi okugeza anamathiselwe. Amanani ayahlukahluka kuye ngokuthi mangaki amagumbi abhukhiwe. Uma igumbi selibhukhwe yisivakashi, ngeke sihambise okunye ukubhuka ku-villa. Lokhu kuzonikeza izivakashi ubumfihlo obuphelele bokusebenzisa i-villa. Nokho izihambeli zingasebenzisa KUPHELA igumbi/amakamelo abhukhiwe . Amanye amagumbi NGEKE ATHOLAKALA ukuze asetshenziswe wona.
1 ikamelo eliphindwe kabili - $60 ubusuku ngabunye
2 amakamelo amabili - $120 ubusuku ngabunye
Amakamelo ama-doube angu-3 - $ 180 ubusuku ngabunye
Isivakashi esengeziwe sizokhokhiswa u-$35 ngekamelo.
Uma izihambeli zingathandi ukwabelana ngamagumbi kuzodingeka zibhukhe amagumbi engeziwe noma zikhulume nomsingathi.
Ukudla kwasekuseni kuhlinzekwa mahhala. Isidlo sasemini nesakusihlwa singanikezwa ngenkokhelo eyengeziwe.
Kukhona indawo yokuhlala evulekile negumbi lokudlela eline-TV nesidlali seDVD. Umnakekeli ophilayo kanye nompheki uyatholakala.
Ngicela ungithinte ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana namanani entengo.
Iyindawo enokuthula evikelekile enezihlahla eziningi nezinhlobonhlobo zezinyoni. Ukuphuma kwelanga nokushona kwelanga phezu kwechibi kuyamangaza. Ubusuku benyanga egcwele onqenqemeni lwechibi bungajabulisa ukuchitha isikhathi esithile sekhwalithi.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho uzonakwa umnakekeli ophilayo "fareeda" kanye nompheki "sumathi".
Uma unezinkinga ekuxhumaneni nabo ngicela ungithinte.
Hlola ezinye izinketho ezise- Panadura namaphethelo